Nhọrọ dị ọnụ ala maka njem | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | ulo, Atụmatụ, njem
Maka ndị anyị na-achọ ịme njem, oge ọ bụla dị mma ịme ya, ma ọ bụ oge oyi ma ọ bụ oge ọkọchị, anyị achọghị ịma. Ihe anaghị enye anyị otu ihe ahụ bụ etu esi eme ya ego ọ ga-ewe si n’otu ebe gaa ebe ọzọ. Ka anyi kwuo eziokwu, njem abụghị ihe ekwuru na ọ bụ ọnụ ala, ma ọ bụrụ na ịmaghị ụzọ iji belata mmefu na ha.
Maka ndị na-amatabeghị ohere ndị dịnụ iji mee njem njem akụ na ụba na uru, anyị na-eweta edemede a taa: Nhọrọ dị ọnụ ala maka njem. Akpa gị ga-ekele gị.
1 Ikpokọta oriri nyiwe
2 Costgbọ elu dị ọnụ ala
3 Traingbọ oloko ahụ, dị ka nnukwu ohere
4 Dị ọnụ ala ebe na Europe njem
5 Ebe kachasị dị ọnụ ala n'ụwa iji gaa
Ikpokọta oriri nyiwe
Airbnb bụ ikpo okwu ebe ndị ọrụ edebanyere aha ha na-enye ụlọ ha (zuru) ma ọ bụ ụlọ maka ọnụahịa dị ala karịa ihe ị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ họtel na / ma ọ bụ gọọmenti rụrụ.
Ihe dị ezigbo mma gbasara ikpo okwu a bụ na ndị ọrụ na-eleta ụlọ na-emekarị mgbe e mesịrị ọnụahịa (nke oma ma obu nke ojoo) yana ikwu, nke na-enye gị ntụkwasị obi dị ukwuu nke eziokwu nke data ahụ, ịdị mma nke onye ịgbazite, wdg.
M na-eji a n'elu ikpo okwu ugboro abụọ na ma m nnọọ obi ụtọ. Nwere ike ịchọta ya na weebụ yana kwa na ngwa mkpanaka.
En Nduzi ị nwere ike ịnọ n'efu na ndị njem ndị ọzọ n'ọnọdụ ọrụ ma ọ bụ ego. Staydu na weebụsaịtị ya na-enye gị ngalaba dị iche iche: otu ndị njem na-agbanwere ahụmịhe, oghere ebe ị nwere ike ịchọta ndị njem njem (ị nwere ike ịdebanye aha atụmatụ njem gị na ụbọchị na ebe ị ga-aga), gaa na akpa nchekwa mpaghara na mba ị na-ahọrọ ma ọ bụ kpọọ ya ka ọ bịa n'obodo gị n'oge ọzọ ka ị gbanwee n'ụzọ dị otú a enyemaka enyere.
Ọ bụ otu n'ime ụzọ dị ọnụ ala ala karịa njem anyị hụrụ na webụ. Ọ bụkwa usoro a na-arụsi ọrụ ike nke nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị edebara aha.
Costgbọ elu dị ọnụ ala
Airfọdụ ụgbọ elu na-amasị Mfe Jet o Ryan ikuku, na-asọrịta mpi n’etiti onwe ha iji nye ọnụego ụgbọ elu dị ọnụ ala na Europe. Site n'oge ruo n'oge ha na-enye onyinye ụgbọ elu maka ihe karịrị 25 euro tiketi: ọ joyụ maka anya onye njem ọ bụla! N'ezie, gbalịa ịgụ ezigbo mbipụta tupu ịzụrụ ihe ọ bụla, ebe ọ bụ ebe ahụ ka ihe ndị njem ahụ chọrọ na-apụtakarị na ọ bụrụ na ileghị anya, ọ nwere ike ịdị ọnụ karịa ụgbọ elu ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Traingbọ oloko ahụ, dị ka nnukwu ohere
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga gburugburu Europe, dịka ọmụmaatụ, ndị tren ọ nwere ike ịbụ ụzọ njem gị zuru oke. Ọ bụ ụgbọ oloko ebe ị na-ezute ọtụtụ ndị njem dị ka gị, ndị mmadụ na-aga otu ebe na ndị guzobere ụzọ na atụmatụ nwere ike ịbụ ezigbo nduzi ma ọ bụrụ na ịmaghị mpaghara ahụ, wdg.
Ọ na-aga n'ekwughị na tiketi ụgbọ oloko na-abụkarị ọnụ ọnụ karịa nke ndị ụgbọ elu na-enye ma ị gaghị echegbu onwe gị nke ukwuu mgbe ị na-ebu akpa, abụọ ma ọ bụ atọ ...
Dị ọnụ ala ebe na Europe njem
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga njem na Europe ma ị maghị ebe ndị dị ọnụ ala ime ya, lee, anyị ga-ewetara gị ndepụta nke ga-enyere gị aka nke ukwuu mgbe ị na-ahọrọ ebe ị ga-aga. ọzọ ma ọ bụ ezumike:
Saint Petersburg (Russia).
Ebe kachasị dị ọnụ ala n'ụwa iji gaa
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ ókèala Europe, ndị a nwere ike ịbụ ụfọdụ ebe ị ga-aga n'ọdịnihu:
Ebe ndị a dị ọnụ ala karịa maka ebe obibi na nri anyị nwere ike ịchọta ebe ahụ. Ọ bụ ezie na ihe kachasị ọnụ, ọ bụrụ na anyị ahapụ Spain, obi abụọ adịghị ya bụ ụgbọ elu ahụ.
Anyị nwere olile anya na site n’isiokwu a, ego agaghị enwe nsogbu ọ bụla ma a bịa n’ịga njem ebe ị họọrọ. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, echela na ime mgbalị dị ukwuu iji nwee ike isi n'otu ebe gaa ebe ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nhọrọ dị ọnụ ala maka njem
Ebe dị nso maka mgbagharị na Nọvemba
Nleta 8 amaghị na obodo Rome